मुसाले वा छुचुन्द्रो ले मानिसलाई हत्तपत्त टोकी हाल्दैन तर पनि कहिले काँही कुनै कारण ले गर्दा मुसाले टोक्न सक्छ । हरेक मानिसको भोलीको दिन कसरी बित्छ ? कस्तो हुन्छ ? कसैलाई थाहा हुँदैन । नसोचेको कुनै जीवले टोकि दिन्छ र आत्तिनु पर्ने स्तिथि आउन सक्छ । मुसाको टोकाई पनि यस्तै नसोचेको, अफ्ट्यारो घट्नामा नै पर्ने गर्दछ । भनाई छ नी दसा बाजा बजाएर आउदैन ।
दसा लागेपछी अनेक हुन् सक्छ । मुसाले टोक्नेै आँट्दा बसेकै ठाँउमा आएर टोकिदिन्छ । जँगली मुसा ठुलो हुने गर्दछ ,घरमा हुने सानो टाइपको मुसा सानो मेडियम साइज का हुने गर्दछन । मुसाको पनी धेरै वटा प्रजाती छन र ति मुसामा हुने ब्याक्टेरिया भाइरसहरु पनि फरक-फरक किसिमको का रहेका हुन्छन । कुन मुसाले टोक्दा कस्ता भाइरसहरु सर्छन भन्ने बारेमा जानकारी बिस्तारै दिदै जानेछु कृपया पुरा पढ्दै जानुहोस ।
मुसाको दाँत लामो तिखो टाइपको हुन्छ । मुसालाई समस्या पर्यो भने मुसाले दाँत ले नै हमला गर्दछ । मुसाले टोक्यो भने हामीलाई इन्फेक्सन हुन्छ । ज्वरो आँउछ । मुसाले टोकेपछी आउने ज्वरोलाई Rat bite fever भनिन्छ । मुसाको दाँतमा रहेको र्याल मा विभिन्न प्रकारको ब्याक्टेरियाहरु रहेका हुन्छन । जस्ले गर्दा मुसाले टोकेपछि हामिलाई उक्त र्यालबाट इन्फेक्सन र टिटनास हुन्छ । मुसाको प्रकार र व्याकेटेरिया को प्रकार अनुसार लक्षणहरु फरक फरक देखिन्छन । मुसा वा छुचुन्द्रो ले टोकेपछी रातो हुने,रगत बग्ने र दुख्ने वा सामान्य पोल्ने गर्दछ ।
यदि मुसा वा छुचुन्द्रो ले नै टोकेको हो भने ज्वरो आँउछ । Leptospirosis , typhus र plague जस्ता सङ्क्रमण हुने गर्दछ । यस्ता रोगका ब्याटेरियाहरु बिरालो, जनावर, कुकुर, मुसा, छुचुन्द्रामा पाईन्छ ।मुसाले टोक्ने बितिकै डाक्टर कोमा गईहाल्नुहोस । यदि उपचार गर्न ढिलो भयो भने अरु ठुलो समस्याहरु जस्तै मस्तिस्क को समस्या, निमोनिया को समस्या, हेपाटाइटिस र मेनेन्जाइटिस जस्ता समस्याहरु निम्तिन्छ । मुसा वा छुचुन्द्रो ले टोक्दा अझै ठुलो समस्या बनाउने सम्भावना हुने भएकाले तुरुन्तै डाक्टरको मा गईहाल्नुपर्दछ ।
त्यसैगरी अर्को भाइरस छ हेन्टाभाइरस । यो हेन्टाभाइरस भनेको सेतो खुट्टा भएको मुसा बाट सर्ने गर्दछ । बिसेस गरी जँगली प्रजातिको मुसा रुखमा बस्ने,धान को कुनिउमा,परालमा बस्ने गर्दछ । घरमा बस्ने मुसामा पनि यो भाइरस हुन्छ । Rice rat,cotton rat,पनि भनिन्छ । यो टाइपको मुसामा हेन्टा भाइरस पाइन्छ ।
यो टाइपको भाइरस सङ्क्रमण भएपछि ज्वरो आउने, पखाला लाग्ने,जिउ दुख्ने,बमिट हुने,थकाई लाग्ने श्वासप्रस्वास सम्बन्धि समस्या बनाउने गर्दछ । यो हेन्टा भाइरसको औषधी आज सम्म विज्ञान ले पत्ता लगाएको छैन । र हेन्टा भाइरस लागि सकेपछी यसको पूर्ण उपचार सम्भव छैन । तर सुरुमै थाहा भयो यो भाइरस ले सक्रमण गरेको भने यसलाई रोकथाम विधि मार्फत उपचार गरिन्छ तर पूर्णरुपमा उपचार भने सम्भव हुदैन ।
मुसा वा छुचुन्द्राले टोकेमा प्रथम चरणमा यस्ता लक्षणहरु देखिने गर्छन ।घाउ सुन्निने गर्छ ।मुसाले टोकेको २ दिन पछीबाट ज्वरो आउने गर्दछ । जसलाई Rat bite fever / rabbit fever भनिन्छ । बमिटिङ हुन्छ ।पखाला लाग्छ । जोर्नी दुख्छ ।माँसपेशी दुख्छ ।मुसा वा छुचुन्द्राले टोक्दा डाक्टरको मा गइहाल्नुहोस । नपत्याउदा साना साना जीवहरुको शरिरमा विभिन्न किसिम का भाइरसहरु रहेका हुन्छन र हामिलाई ति भाइरस को संक्रमण हुने गर्दछ ।‌
त्यसैले भै परी आएको खण्डमा तुरन्त डाक्टर कहा गइ उपचार गर्न तिर ध्यान दिनुहोस ।‌नेपाली हेल्थ मिडिया ले रोचक र अति नै महत्वपूर्ण जनाकारी मात्र पब्लिश गर्दछ ।‌ थप जानकारी पढ्न को लागि अन्य पोस्टहरु हेर्नुहोस ।‌ साथै यो जानकारी सबै समक्ष् पुर्याउन र सबैलाई सचेत गराउन सक्दो सेयर गर्नुहोस ।‌ तपाइको एक सेयरले धेरै लाइ सचेत गराउदछ ।‌
Previous सेती नदीमा…..टिकटक बनाउने क्रममा खसेर युवती बे,पत्ता, आठ दिनपछि भेटियो बे,पत्ता बालिकाको श,व…
Next फेसबुकको love : इन्जिनियर हुँ भन्दै बिहे गरेको केटो १० कक्षा पास मात्रै !